Jamie Carragher ayaa faallo ka bixiyay hoos u dhaca Liverpool ka dib guuldaradii vs Burnley Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Jamie Carragher ayaa faallo ka bixiyay hoos u dhaca Liverpool ka dib...
Jamie Carragher ayaa faallo ka bixiyay hoos u dhaca Liverpool ka dib guuldaradii vs Burnley
Daaficii hore ee Liverpool Jamie Carragher, wuxuu muujiyay walaaciisa ka dib markii Reds ay guuldarro 1-0 ka soo gaartay Burnley habeenkii Khamiista ee Premier League .
In kasta oo hadda kala-bar uun marayno xilli ciyaareedkii 2020 – 21, haddana guuldarradu waxay dhabar jab ku noqotay rajadii Liverpool ee hanashada horyaalka. Reds ayaa haatan lix dhibcood ka dambeysa hogaamiyaasha horyaalka ee Manchester United, laakiin Jurgen Klopp ayay qasab ku tahay inuu wax sameeyo si uu u qabto hoos u dhacan.
Ashley Barnes ayaa dhaliyay gool soo daahay oo rigoore ahaa kaasoo Liverpool u horseeday guuldaradii ugu horeysay ee garoonkeeda wuxuuna soo afjaray riyadii 68-guuldaro la’aanta ee Anfield ee Premier League.
Liverpool ayaa u dhici karta kaalinta shanaad haddii Tottenham Hotspur ay badiso kulankeeda . Waxay hada aadeen shan kulan iyagoon wax guul ah gaarin horyaalka, Carragher wuxuu sheegay in jamaahiirta Reds ay si weyn uga niyad jabi doonaan xaalada haatan jirta.
Khabiirka caanka ah ee Sky Sports ayaa layaab ku noqotay in ciyaartoy badan oo Liverpool ah aysan qaab ciyaareed wanaagsan kujirin waqtigan, iyagoo sheegay in aaminaada kooxda ay meesha ka baxday.
Previous articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Gabriel Veron oo ku biiri kara Man Utd iyo Qodobo kale
Next articleBayern Munich oo xaqiijisay inay xiiseyneyso ciyaaryahanka RB Leipzig Dayot Upamecano